Muxuu ka yiri Shaqiri inuu kusoo bilaawday kursiga keydka saddexdii kulan ay Liverpool kasoo ciyaartay Premier League? – Gool FM
Muxuu ka yiri Shaqiri inuu kusoo bilaawday kursiga keydka saddexdii kulan ay Liverpool kasoo ciyaartay Premier League?
Dajiye August 28, 2018
(Liverpool) 28 Agoosto 2018. Xherdan Shaqiri ayaa iska diiday fikrada ah inuu ka careesan yahay inuusan kasoo muuqan shaxda tooska ah ee tababare Jürgen Klopp ee kooxda Liverpool tan iyo bilawga xili ciyaareedka ay kasoo ciyaareen saddex kulan.
Laacibka reer Switzerland ayaa wuxuu yimid kooxda Liverpool kadib markii uu kaga soo biiray dhigeeda Stoke City, kadib markii ay Rids kula soo wareegtay aduun dhan £ 13 million.
Laakiin Xherdan Shaqiri ayaanan kasoo muuqan shaxda koowaad ee Jürgen Klopp saddexadii kulan lasoo dhaafay ay ka ciyaareen horyaalka Premier League, laakiin laacibka ayaa sheegay inuusan ka careysneen arintan.
“Macalinka wuxuu lasoo wareegay suuqan xagaaga xidigo badan ee aad u wanaagsan, tani waxay ka caawineysaa inay horumariyaan kooxda”.
“Kooxda waxay sameesay saxiixyada ciyaartoyda boosas kala duwan, taasoo ka dhigeysa in ay xooganaato isla markaana ay noqoto mid aad u fiican, ilaa iyo haatan waxaan ku bilaabanay qaab aad u wanaagsan”.
“Waxaan aaminsanahay inaan awoodo inaan ka ciyaari karo boos kasta ee dhankaa weerarka ah, macalinka si wanaagsan ayuu arintaas kaga war qabaa”.
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday in Paco Alcácer uu u dhaqaaqay kooxda Borussia Dortmund
Harry Kane oo fariin cad ee digniin ah u diray kooxda Liverpool, kadib guushii ay ka gaareen Manchester United